တင်နေတဲ့ အကြွေးတွေကြေပြီး လာဒ်ရွှင်ငွေဝင် ငွေကြေး အခက်အခဲ ပြေလည်ဖို့ ဒါလေးပဲ လုပ်ကြည့်ပါ - 9style
Home/အထွေထွေဗဟုသုတ/တင်နေတဲ့ အကြွေးတွေကြေပြီး လာဒ်ရွှင်ငွေဝင် ငွေကြေး အခက်အခဲ ပြေလည်ဖို့ ဒါလေးပဲ လုပ်ကြည့်ပါ
တင်နေတဲ့ အကြွေးတွေကြေပြီး လာဒ်ရွှင်ငွေဝင် ငွေကြေး အခက်အခဲ ပြေလည်ဖို့ ဒါလေးပဲ လုပ်ကြည့်ပါ
၁။ တစ်ချိန်တုန်းက အရမ်းစိတ်ညစ်ခဲ့ပါသည် ။ အိမ်က အကြွေးတွေ တင်နေလို့ပါ..အကြွေးတင်တာ က အကြောင်းမဟုတ်.. လကုန်ရင် ပေးရသည့် အတိုးက ပူနေရသည်။ စားပြီးသောက်ပြီး ပိုလျှံတာ အတိုးပေးလိုက်ရသည်။ အတိုးဆိုတဲ့အရာကြီးကို အိပ်ထဲထည့် အဝေးကို လွှင့်ပစ်လိုက်ချင်သည် ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ကိုယ်က လိုလို့ သွားယူထားတာကို … အဲလိုအခက်ခဲဖြစ်နေတုန်း လာဒ်ရွှင်ငွေဝင်စေမည် ဆိုသော ဗန်မော်ဆရာတော် ဒေါက်တာ ကုမာရဘိဝံသ ချီးမြှင့်သော ပုတီးစိတ်နည်းလေး ရလိုက်သည်။ စိတ်ကြည့်လိုက်မယ်..မထူးခြားတော့ အကြွေးမကြေတော့လည်း ကုသိုလ်ရတာပေါ့လေ ဆိုပြီး စိတ်လိုက်မိပါသည်။ ၃ လနေတော့ လုပ်ငန်းတစ်ခု ပေါ်ပြီး အကြွေးတစ်ဝက်ကြေသွားသည်။ အတိုးတ၀က်သက်သာသွားပြီ ။ နောက် ၃ လ နေတော့ လုံးဝ ကြေသွားတော့သည်။ (မိမိကိုယ်တွေ့ဖြစ်သည်။)
၂။ တစ်နေ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ဟောခန်းထဲရောက်လာသည်။ အိမ်ရောင်းချင်လို့ တဲ့ .ရောင်းတော့မရောင်းချင်ပါဘူး ဆရာရယ်.. ချွှေးမလုပ်တဲ့သူက နှစ်လုံးကစားလိုက်တာ သိန်းနှစ်ဆယ်လောက် အကြွေးတင် သွားတာ .. အဲဒါသားက စိတ်ညစ်နေလို့ ကျွန်မက အိမ်ေ၇ာင်းပြီးဆပ်ပေးမလို့ပါတဲ့..(တော်တော်သဘောကောင်းတဲ့ ယောက္ခမပါပဲ) ကျွန်တော်ကလည်း ဂုဏ်တော် ၉ ပါး ကို ၁၀ ကြိမ်ခွဲပြီးပုတီးစိတ်ပါ ။ မနက် ၁၀တ် / နေ့လည် ၁၀ ပတ် / ည ၁၀ ပတ် ပုတီးစိတ်ပေးပါ။ ပဌာန်းအကျယ်ကို မနက်တစ်ခေါက် ည တစ်ခါက် မေတ္တာသုတ်ကို မနက် ၇ ခေါက် ၊ ည ၇ ခေါက် ရွတ်ပါ လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ တစ်လနေတော့ ပြန်ရောက်လာတယ် အဆင်ပြေသွားပြီ ဆရာ အိမ်လည်းရောင်းစရာ မလိုတော့ဘူးတဲ့ .. အဲဒါနဲ့မေးကြည့်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်က ယောကျာင်္းနောက်လိုက်သွားတဲ့ ညီမအငယ်ဆုံး က ပြန်လာတယ်…သူ့ယောကျာင်္းက ရွှေတွင်းအောင်ပြီး ချမ်းသာနေပြီ .. အဲဒီ ညီမက အမ အိမ်မရောင်းပါနဲ့ ။ ဆိုပြီး သိန်း ၂၅ သိန်း ထုတ်ပေးသွားလို့ အကြွေးတွေလည်း ဆပ်ပြီးပြီ ဆရာ ဆိုပြီး ၀မ်းသာအားရ လာပြောပါသည်။
၃။ ပူစူးမ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်အိမ်ကို ရောက်လာတယ် ဆရာရယ် အကြွေး ၇ သိန်းခွဲလောက်တင်နေလို့တဲ့…. ယောကျားလုပ်တဲ့ သူက ထွေလာဂျီမောင်းပါတယ် ။ အဲဒါနဲ့ ဂုဏ်တော် ၉ ပါး ကို တစ်နေ့ အပတ် ၃၀ စိတ် ၊ ပဌာန်းအကျယ်ကို မနက်တစ်ခေါက် ည တစ်ခါက် ရွတ်ပါ။ မတတ်နိုင်ရင် ၂၄ ပစ္စည်း (အကျဉ်း)ကို မနက် ၂၄ ခေါက် ည ၂၄ ခေါက် ရွတ်ပါ လို့ ပြောလိုက်တယ်။
တစ်လနေတော့ ပြန်လာတယ် .ဆရာ ဘာမှ မထူးခြားသေးဘူး ၊ အတိအကျစိတ်တာပဲ မနက် ၁၀ ပတ် / နေလည် ၁၀ ပတ် / ည ၁၀ ပတ် ၂၄ ပစ္စည်းလည်း မနက် ၂၄ ခေါက် ။ ည ၂၄ ခေါက် ၇ွတ်တာပဲ တစ်လရှိပြီ ဘာမှလည်း မထူးခြားဘူးဆရာ .. လို့ ဘာပြောပါတယ် . အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ၃ လ အဓိဌာန်ဝင်ခိုင်းထားတာပဲ ဟာ နောက် တစ်လ ထပ်စိတ်ကြည့်ပါ လို့ ပြောလိုက်တာ .. သူလည်း ပြန်သွားပါတယ်.. နောက် လာပြောတယ် ၂ လနေတော့ ထီ တစ်ခါ ပေါက်တယ် ။ ၃ လနေတော့ ထီ တစ်ခါ ပေါက်တယ် .တဲ့ ထီ ၂ ခါ ပေါက်လိုက်တာ ၁၆ သိန်းလောက်ရတယ် တဲ့ .. အကြွေးလည်း ဆပ်ပြီး ပြီ ဆိုပြီ လာပြောပါတယ် ဗျာ …. (တကယ့် အဖြစ်တစ်ခုပါ) အဲဒါကတော့ ဂုဏ်တော ၉ ပါး ကို မနက် ၁၀ ပတ် / နေ့လည် ၁၀ ပတ် / ည ၁၀ ပတ် ပုတီးစိတ်ပါ။
မေတ္တာသုတ်ကို မနက် ၇ ခေါက် ည ၇ ခါက် ၇ွတ်ပါ။ပဌာန်း အကျယ်ကို မနက်တစ်ခေါက် ည တစ်ခါက်ရွတ်ပါ ။မတတ်နိုင်ရင် ၂၄ ပစ္စည်းကို မနက် ၂၄ ခေါက် / ည ၂၄ ခေါက် ၇ွတ်ပါလို့ ပြောလိုက်တာပါပဲ ဗျာ ….
ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ( ၁၀ ကြိမ်ခွဲ ) ပုတီး စိတ်နည်း
၁။ အရဟံ ……………….. တစ်လုံး ချ နဲ့ ………… ၁ ပတ်စိတ်၂။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ …………တစ်လုံး ချ နဲ့ ………… ၁ ပတ်စိတ် ၃။ ၀ိဇ္ဖာစရဏသမ္ပန္နော…..တစ်လုံး ချ နဲ့ ………… ၁ ပတ်စိတ် ၄။ သုဂတော….. တစ်လုံး ချ နဲ့ ………… ၁ ပတ်စိတ် ၅။ လောက၀ိဒူ ….တစ်လုံး ချ နဲ့ ………… ၁ ပတ်စိတ် ၆။ အနုတ္တရော ….တစ်လုံး ချ နဲ့ ………… ၁ ပတ်စိတ် ၇။ ပုရိသဒမ္မသာရထိ …….တစ်လုံး ချ နဲ့ ………… ၁ ပတ်စိတ် ၈။သတ္ထာဒေ၀မနုဿာနံ…..တစ်လုံး ချ နဲ့ ………… ၁ ပတ်စိတ် ၉။ ဗုဒ္ဓေါ . ….တစ်လုံး ချ နဲ့ ………… ၁ ပတ်စိတ် ၁၀။ ဘဂ၀ါ … ..တစ်လုံး ချ နဲ့ ………… ၁ ပတ်စိတ် အားလုံးပေါင်း (၁၀) ပတ် တစ် ထိုင်တည်းစိတ်ပါ။
မနက် ၁၀ ပတ် ၊ နေ့လည် ၁၀ ပတ် ၊ ည ၁၀ ပတ် တစ်နေ့ အပတ် ၃၀ စိတ်ပေးပါ။လာဒ်တော်တော်ကြီးပိတ်ရင် အပတ် ရေ တိုးစိတ်နိုင်ပါသည်။ ရက် ( ၉၀ ) အဓိဌာန် ၀င်ပါ ။ ရက်ပေါင်း ၄၀/ ၆၀ မှ ထူးခြားပါတယ်…. မှတ်ချက် ။ ။ငွေကြေးအခက်အခဲ ရှိသူများ ၊ ငွေကြေးမပြေလည်သူများ ၊ အကြွေးတင်နေသူများ၊ အကြွှေးမဆပ်နိုင်သူများ ၊ ရောင်းအ၀ယ် မကောင်းသူများ ၊ အကြွေးမရသူများ အတွက် ငွေကြေး အထူး လာဒ်ရွှင်စေ ငွေ ၀င်စေသော ပုတီးစိတ်နည်းဖြစ်ပါသည်။
လိုသလောက်မရသောလည်း လုပ်သလောက် ရပါသည်။ ကြိုးစားကျင့်ဆောင်ဖြင်းဖြင့် ငွေကြေးအခက်ခဲ ပြေလည်ကြပါစေ..ခင်ဗျာ.. ၇ရက် သားသမီးများအတွက် မေတ္တာရှေ့ထားကာ ဆရာဗေဒင်ထံမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
၁။ တဈခြိနျတုနျးက အရမျးစိတျညဈခဲ့ပါသညျ ။ အိမျက အကွှေးတှေ တငျနလေို့ပါ..အကွှေးတငျတာ က အကွောငျးမဟုတျ.. လကုနျရငျ ပေးရသညျ့ အတိုးက ပူနရေသညျ။ စားပွီးသောကျပွီး ပိုလြှံတာ အတိုးပေးလိုကျရသညျ။ အတိုးဆိုတဲ့အရာကွီးကို အိပျထဲထညျ့ အဝေးကို လှငျ့ပဈလိုကျခငျြသညျ ။ ဒါပမေဲ့ ဘယျတတျနိုငျမလဲ ကိုယျက လိုလို့ သှားယူထားတာကို … အဲလိုအခကျခဲဖွဈနတေုနျး လာဒျရှငျငှဝေငျစမေညျ ဆိုသော ဗနျမျောဆရာတျော ဒေါကျတာ ကုမာရဘိဝံသ ခြီးမွှငျ့သော ပုတီးစိတျနညျးလေး ရလိုကျသညျ။ စိတျကွညျ့လိုကျမယျ..မထူးခွားတော့ အကွှေးမကွတေော့လညျး ကုသိုလျရတာပေါ့လေ ဆိုပွီး စိတျလိုကျမိပါသညျ။ ၃ လနတေော့ လုပျငနျးတဈခု ပျေါပွီး အကွှေးတဈဝကျကွသှေားသညျ။ အတိုးတဝကျသကျသာသှားပွီ ။ နောကျ ၃ လ နတေော့ လုံးဝ ကွသှေားတော့သညျ။ (မိမိကိုယျတှဖွေ့ဈသညျ။)
၂။ တဈနေ့ အဒျေါကွီးတဈယောကျဟောခနျးထဲရောကျလာသညျ။ အိမျရောငျးခငျြလို့ တဲ့ .ရောငျးတော့မရောငျးခငျြပါဘူး ဆရာရယျ.. ခြှေးမလုပျတဲ့သူက နှဈလုံးကစားလိုကျတာ သိနျးနှဈဆယျလောကျ အကွှေးတငျ သှားတာ .. အဲဒါသားက စိတျညဈနလေို့ ကြှနျမက အိမျရောငျးပွီးဆပျပေးမလို့ပါတဲ့..(တျောတျောသဘောကောငျးတဲ့ ယောက်ခမပါပဲ) ကြှနျတျောကလညျး ဂုဏျတျော ၉ ပါး ကို ၁၀ ကွိမျခှဲပွီးပုတီးစိတျပါ ။ မနကျ ၁၀တျ / နလေ့ညျ ၁၀ ပတျ / ည ၁၀ ပတျ ပုတီးစိတျပေးပါ။ ပဌာနျးအကယျြကို မနကျတဈခေါကျ ည တဈခါကျ မတ်ေတာသုတျကို မနကျ ၇ ခေါကျ ၊ ည ၇ ခေါကျ ရှတျပါ လို့ ပွောလိုကျပါတယျ။ တဈလနတေော့ ပွနျရောကျလာတယျ အဆငျပွသှေားပွီ ဆရာ အိမျလညျးရောငျးစရာ မလိုတော့ဘူးတဲ့ .. အဲဒါနဲ့မေးကွညျ့တော့ လှနျခဲ့တဲ့ ၈ နှဈက ယောကြာင်္းနောကျလိုကျသှားတဲ့ ညီမအငယျဆုံး က ပွနျလာတယျ…သူ့ယောကြာင်္းက ရှတှေငျးအောငျပွီး ခမျြးသာနပွေီ .. အဲဒီ ညီမက အမ အိမျမရောငျးပါနဲ့ ။ ဆိုပွီး သိနျး ၂၅ သိနျး ထုတျပေးသှားလို့ အကွှေးတှလေညျး ဆပျပွီးပွီ ဆရာ ဆိုပွီး ဝမျးသာအားရ လာပွောပါသညျ။
၃။ ပူစူးမ ဆိုတဲ့ ကောငျမလေး တဈယောကျအိမျကို ရောကျလာတယျ ဆရာရယျ အကွှေး ၇ သိနျးခှဲလောကျတငျနလေို့တဲ့…. ယောကြားလုပျတဲ့ သူက ထှလောဂြီမောငျးပါတယျ ။ အဲဒါနဲ့ ဂုဏျတျော ၉ ပါး ကို တဈနေ့ အပတျ ၃၀ စိတျ ၊ ပဌာနျးအကယျြကို မနကျတဈခေါကျ ည တဈခါကျ ရှတျပါ။ မတတျနိုငျရငျ ၂၄ ပစ်စညျး (အကဉျြး)ကို မနကျ ၂၄ ခေါကျ ည ၂၄ ခေါကျ ရှတျပါ လို့ ပွောလိုကျတယျ။
တဈလနတေော့ ပွနျလာတယျ .ဆရာ ဘာမှ မထူးခွားသေးဘူး ၊ အတိအကစြိတျတာပဲ မနကျ ၁၀ ပတျ / နလေညျ ၁၀ ပတျ / ည ၁၀ ပတျ ၂၄ ပစ်စညျးလညျး မနကျ ၂၄ ခေါကျ ။ ည ၂၄ ခေါကျ ရှတျတာပဲ တဈလရှိပွီ ဘာမှလညျး မထူးခွားဘူးဆရာ .. လို့ ဘာပွောပါတယျ . အဲဒါနဲ့ ကြှနျတျောလညျး ၃ လ အဓိဌာနျဝငျခိုငျးထားတာပဲ ဟာ နောကျ တဈလ ထပျစိတျကွညျ့ပါ လို့ ပွောလိုကျတာ .. သူလညျး ပွနျသှားပါတယျ.. နောကျ လာပွောတယျ ၂ လနတေော့ ထီ တဈခါ ပေါကျတယျ ။ ၃ လနတေော့ ထီ တဈခါ ပေါကျတယျ .တဲ့ ထီ ၂ ခါ ပေါကျလိုကျတာ ၁၆ သိနျးလောကျရတယျ တဲ့ .. အကွှေးလညျး ဆပျပွီး ပွီ ဆိုပွီ လာပွောပါတယျ ဗြာ …. (တကယျ့အဖွဈတဈခုပါ) အဲဒါကတော့ ဂုဏျတော ၉ ပါး ကို မနကျ ၁၀ ပတျ / နလေ့ညျ ၁၀ ပတျ / ည ၁၀ ပတျ ပုတီးစိတျပါ။
မတ်ေတာသုတျကို မနကျ ၇ ခေါကျ ည ၇ ခါကျ ရှတျပါ။ပဌာနျး အကယျြကို မနကျတဈခေါကျ ည တဈခါကျရှတျပါ ။မတတျနိုငျရငျ ၂၄ ပစ်စညျးကို မနကျ ၂၄ ခေါကျ / ည ၂၄ ခေါကျ ရှတျပါလို့ ပွောလိုကျတာပါပဲ ဗြာ ….
ဂုဏျတျော(၉)ပါး ( ၁၀ ကွိမျခှဲ ) ပုတီး စိတျနညျး
၁။ အရဟံ ……………….. တဈလုံး ခြ နဲ့ ………… ၁ ပတျစိတျ၂။ သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓေါ …………တဈလုံး ခြ နဲ့ ………… ၁ ပတျစိတျ ၃။ ဝိဇ်ဖာစရဏသမ်ပန်နော…..တဈလုံး ခြ နဲ့ ………… ၁ ပတျစိတျ ၄။ သုဂတော….. တဈလုံး ခြ နဲ့ ………… ၁ ပတျစိတျ ၅။ လောကဝိဒူ ….တဈလုံး ခြ နဲ့ ………… ၁ ပတျစိတျ ၆။ အနုတ်တရော ….တဈလုံး ခြ နဲ့ ………… ၁ ပတျစိတျ ၇။ ပုရိသဒမ်မသာရထိ …….တဈလုံး ခြ နဲ့ ………… ၁ ပတျစိတျ ၈။သတ်ထာဒဝေမနုဿာနံ…..တဈလုံး ခြ နဲ့ ………… ၁ ပတျစိတျ ၉။ ဗုဒ်ဓေါ . ….တဈလုံး ခြ နဲ့ ………… ၁ ပတျစိတျ ၁၀။ ဘဂဝါ … ..တဈလုံး ခြ နဲ့ ………… ၁ ပတျစိတျ အားလုံးပေါငျး (၁၀) ပတျ တဈ ထိုငျတညျးစိတျပါ။
မနကျ ၁၀ ပတျ ၊ နလေ့ညျ ၁၀ ပတျ ၊ ည ၁၀ ပတျ တဈနေ့ အပတျ ၃၀ စိတျပေးပါ။လာဒျတျောတျောကွီးပိတျရငျ အပတျ ရေ တိုးစိတျနိုငျပါသညျ။ ရကျ ( ၉၀ ) အဓိဌာနျ ဝငျပါ ။ ရကျပေါငျး ၄၀/ ၆၀ မှ ထူးခွားပါတယျ…. မှတျခကျြ ။ ။ငှကွေေးအခကျအခဲ ရှိသူမြား ၊ ငှကွေေးမပွလေညျသူမြား ၊ အကွှေးတငျနသေူမြား၊ အကွှေးမဆပျနိုငျသူမြား ၊ ရောငျးအဝယျ မကောငျးသူမြား ၊ အကွှေးမရသူမြား အတှကျ ငှကွေေး အထူး လာဒျရှငျစေ ငှေ ဝငျစသေော ပုတီးစိတျနညျးဖွဈပါသညျ။
လိုသလောကျမရသောလညျး လုပျသလောကျ ရပါသညျ။ ကွိုးစားကငျြ့ဆောငျဖွငျးဖွငျ့ ငှကွေေးအခကျခဲ ပွလေညျကွပါစေ..ခငျဗြာ.. ၇ရကျ သားသမီးမြားအတှကျ မတ်ေတာရှထေ့ားကာ ဆရာဗဒေငျထံမှ ကူးယူဖျောပွပါသညျ။
ဘောင်းဘီအိတ် ထဲ ဖုန်းထည့်ဆောင်သူတွေ ကလေးအဖေဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းသွားနိုင်
လူမှုကွန်ယက်မှာ လူသိများပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူတစ်ဦးဖြစ်လာစေမယ့် ရိုးရှင်းတဲ့ အဆင့် ၅ ဆင့်
ငလျင်ပညာရှင်များက မြန်မာပြည်ရော ဂျပန်ရော ငလျင်ကြီးတွေ လှုပ်တော့မယ်လို့ပြော